एक महिनामै १४ करोडले बढ्यो विद्युतीय सवारी साधनको आयात, कुन देशबाट कति ? - Arthatantra.com
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधानको आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महिनाको अवधिमा ३२ करोड ९५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय सवारी साधनको आयात गरिएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको चैतको तुलनामा बैशाख मसान्तसम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको आयात ७२.२३ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँले बढेको हो । चैतमसान्तसम्म १९ करोड १३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको १०८ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो ।
विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा १५३ वटा विद्युतीय सवारी साधनहरु आयात भएको छ । नेपालमा छिमेकी दुई मुलुक चीन, भारत, अमेरिका र कोरियाबाट विद्युतीय सावरी साधान आयात हुने गरेको छ । जसमध्ये विभिन्न तौलका विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
एक महिनाको अवधिमा थप ४५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागले जानकारी दिएको छ । यी सवारी साधनहरु ५० देखि १५० किलोवाटसम्मका हुन् ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी चीनबाट आयात हुने गरेको छ । उक्त देशबाट बैशाख मसान्तसम्ममा १६ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको ११० वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । चीनबाट एक महिनामै थप ३८ वटा सवारी साधान आयात भएको हो ।
चैत र बैशाख महिनाबीचको अवधिमा अमेरिकाबाट थप ६ वटा सवारी आयात भएका छन् । चालु आवको पछिल्ल्लो १० महिनासम्ममा भने ८ करोड ४६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको २० वटा विद्युतीय कार,जीप र भ्यान आयात भएको विभागले जनाएको छ । उक्त देशबाट १०० देखि १५० किलोवाटसम्म सवारी हुन् ।
यस्तै, भारतबाट बैशाख मसान्तसम्ममा ३ करोड ३८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएको छ । एक महिनाको अवधिमा थप १ सवारी आयात भएको हो । भारतबाट ५० किलोवाटभन्दा माथिका सवारी नेपाल भित्रिएको हो ।
त्यसैगरि कोरियाबाट थप बैशाखमा कुनै पनि विद्युतीय सवारी आयात भएको छैन । उक्त देशबाट चैतमसान्तसम्म २ करोड ५० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी नेपाल आएको देखिएको छ । उक्त अवधिमा ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका ७ वटा सवारी आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
वि.सं.२०७८ जेठ १९ बुधवार १३:१० मा प्रकाशित
अघिल्लाे मन्जुश्री फाइनान्सको सेयर मूल्यमा उछाल, प्रतिकित्ता कति बढ्यो ?
पछिल्लाे बैंक, बीमा, खानेपानी, पर्यटन, होटल, सञ्चारलगायत २५ स्थानमा अब हड्ताल गर्न नपाइने (सूचिसहित)